SAS Ongororo - Chii icho, Pros, Cons, uye Kukodzera - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
bhizinesi analytics, Bhizinesi Njere, newgenapps, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Statistical Kuongorora Maitiro is a product suite created by SAS Institute that performs multivariate investigations, advanced analytics, business intelligence, Data management, and various different duties. It’s utilized for quite a while by several significant organization.
A group of SAS procedure statements is called a PROC step. SAS procedures analyze data in SAS data sets to produce nhamba, tables, reports, charts, and plots, to create SQL queries, and to perform other analyses and operations on your data. SAS procedures also give you ways to manage and print SAS files.
Nekuda kweayo ekumusoro maficha, SAS chishandiso chakanyanya kufarirwa. Iyo ine hombe basa musika zvakare. Kune tsananguro dzakawanda kumashure uko izvi zvinofarirwa pamusoro Python uye R mitauro yekuronga. Asi, zviri pachena pachena kuti kune mashoma masungwa eSAS akakundwa neR nePython.
Saka ngatitangei muKuongorora kuti tiwane zvakawanda nezve business intelligence chigadzirwa.
Statistical Analysis Software chirongwa chinoshandiswa pakuongorora maitiro. Icho chinhu chakakura chehunyanzvi dhata pane SAS chirongwa uye kugadzirisa. Nekudaro, inowanzo kushomeka zvine chekuita nedhata pane isiri-tekinoroji bhizinesi timu. Kune rimwe divi, isu tinonzwisisa maitiro ekuita edu mabasa uye maitiro ekuvandudza kugona kwedu. Pane kupesana, isu tinofanirwa kuziva kuwedzera mabhenefiti edu tichiita nenzira yetsika. Ose ari maviri mafiripi mativi emari yakafanana.
SAS inosanganisirwa sisitimu yemapurogiramu esoftware ayo anokupa simba kuti utambe mabasa akapihwa:
Kupinda kwedata, Kudzoreredza, uye manejimendi
Masvomhu uye Statistical kuongorora
Graphic Dhizaini uye Rondedzero yekunyora
Bhizinesi kutarisira uye sarudzo sarudzo
Zvikumbiro Kufambira Mberi
Mashandisiro aunoita SAS anovimba pane izvo zvaunoda kuti uwane. Vanhu vashoma vanoshandisa akawanda emasimba emagetsi, uye vamwe vanoshandisa mashoma acho.
Ida zvaunoverenga? Wobva watora chidimbu chitsva kubva kuraibhurari kwedu pano.
Nei uchishandisa SAS?
The SAS Bhizinesi Njere and Analytical Solution yakaunzwa kumakambani akakura kuti aongorore maseti avo akasarudzika mune sangano rinoona rinoita. Icho chishandiso chekutsvaga data icho chinoshandiswa zvishoma nezvishoma mukati Machine pakudzidza algorithms, Data Science, uye Bhizinesi Njere purposes and analytics software. Not just it implements the company with every fundamental device to screen the key BI metrics yet additionally delivers strong analysis and overall reports for its leaders to settle on adequately informed decisions.
Shandisa SAS yekutanga kuvaka uye kuuraya akawanda mamodheru ekufananidzira pamusoro pemabhizinesi mayuniti. Kwete chete zvinoita kuti iwe uve nekukurumidza uye yakapusa modhi kuvandudza, asi iyo nguva yainotora yekunatsiridza iyo data pakati diki kana hombe dhata seti inowanzoenderana saka data yekumisikidza saizi haisi dambudziko.
Moreover, use SAS and SAS Office Analytics to make a savvy reporting program through the SAS Web Portal and Microsoft Office products. This enables the Enterprise kuendesa ruzivo rwakakosha uye data kune vasiri-SAS vatengi kuburikidza nemaitiro akagadzirwa.
Zvakare, SAS Mobile BI inobatsira vatungamiriri uye mamaneja emabhizinesi kuwana mareport uye madhibhodhi kubva kunzvimbo dziri kure kana kana vachifamba.
Kukodzera kweSAS Software
Chinangwa chikuru ndechekugadzirisa dhata rakaomarara uye kuburitsa njere dzakakosha. Izvi zvinotsigira sangano kuita sarudzo dzakakodzera. Matatu maficha ekushandisa iyi software inoita kuti ive yakakodzera kune akawanda mabhizinesi marongero ndeaya:
1. Bhizinesi Ruzivo
Iyo inonongedzera kumasystem uye matsva anoshandiswa nechero bhizinesi rekuongorora dhata kwe data rebhizinesi. Iyo inopa mabhii eruzivo maererano nezve kupa, fungidziro uye nhoroondo maonero e bhizinesi kushanda. Kuongororwa kweruzivo kunobatsira vakuru bhodhi ine huwandu hwesarudzo yekuita.
2. Kuongorora kweMultivariate
Seizvo zita rinokurudzira Kufanotaura Ongororo inoshandisa ruzivo runosvikika zvinobudirira kutarisira zvichauya. Iyo inoshandisa akasiyana manhamba ehunyanzvi ekuronga inductions. Iyo inodudzira chimwe nechimwe chinhu chichigadzira iyo misiyano, maonero evatengi, kufunga kwakavanzika mune zvinyorwa, zvichingodaro. Pano fungidziro yemhando yekuwedzeredza pateni yakawanikwa mune nhoroondo nhoroondo yekuziva kutyisidzira.
SAS anga ari mutambi anotungamira mu bhizinesi analytics nzvimbo. Iyo ine yakadzikama graphical Mushandisi Interface uye yakakura kwazvo kuunganidzwa kwehuwandu hwenongedzo uye zvakare data rekutsvagisa kugona. Nekuda kwebasa rayo rakakura mumusika, kune akawanda maturusi ekuzvisarudzira anoitsigira zvisinei nerubatsiro rwehunyanzvi rwainopa. Iko kunezvekuwedzera kuwanda mamwe ekuronga maficha ekushandisa pamwe nayo.
Zvakanakira zvakakosha zvinosanganisira -
Zviri nyore kudzidza
SAS ine yakapusa yekudzidza syntax. Inogona kugadziriswa zvinobudirira neiyi isina zvirongwa zveapurogiramu. Kukodha kuri mukirasi yezvinyorwa zvekutanga. Inogona kugadzirisa nyaya dzakaomarara dzakatadza kugadziriswa kare. Izvo zvakaita sekudzidzisa muchina maitiro ekuita.
Inogona kubata neakawanda database
SAS ine simba rakasimba rekugadzirisa dhatabhesi rakakura zvinobudirira. Iwe unogona kuwedzera mikana mitsva, gadzirisa yakawanda mavhoriyamu e data uye woita sarudzo dzakakodzera.
Iwo mutauro unonzwisisika zvakanyanya. Inogona kunyatsogadziriswa. Hwindo rayo rerogi sezviri pachena rinoratidza iko kukanganisa kunogona kunzwisiswa uye kuongororwa.
SAS Kubatsira kwevatengi
SAS kuva nenzvimbo nesangano ine zviri pamutemo kuongorora. Isangano rese. Iyo ine yakasarudzika isina kukamisirwa rubatsiro rwevatengi. Sezvo SAS iri yakavharwa sosi chishandiso, inofanira kuchinjwa nesangano reSAS. Hapana kunze kwekudzikisira kunofungidzirwa. Nyaya dzese dzinotarisirwa rubatsiro rweSAS mutengi.
SAS haimutsiridze nezvimisikidzo zvitsva nekukurumidza seR, zvakadaro zviziviso zvacho zvakaedzwa zvizere zvisati zvasunungurwa. Iwe haugone kuwana nyowani nyowani sekutanga kwazvinoonekwa muna R. Zvisinei, iwe unogona kuvimbiswa kuti vanoshanda.
Iwe unogona kutamisa dhata kuti uite zviverengero zvemamodeli nekukurumidza. Kunyange zvakadaro, haugone kushandisa chirongwa ichi kuita yakaoma graphical plots pasina yakawanda yekuedza.
Kukosha kusakosha kweSAS inosanganisira -
SAS haisi yakavhurika sosi
R yagara ichigadzirisa algorithm nyowani inozivikanwa ne machine learning more rapidly than SAS. The primary reason is R can be controlled by anybody as it is open source, yet this not valid for SAS.
SAS inoshanda mune yakavharwa dura. Nenzira iyi, maalgorithms anoshandiswa sechikamu cheSAS masisitimu haana kuvhurwa kuti ashandise kazhinji. Izvo zvinowanikwa mune rakapihwa marezenisi. Izvo hazvigoneke zviripachena mukutsvaga kwevanhu. Zvinoda kusangana kwakabatana pamwe nemamwe ma software ekunze saR.
Kusamiririka yakajeka graphic
R ine yakasarudzika inowanikwa yekucheka-kumucheto mifananidzo. Dhizaini yayo dhizaini yakanyanya kurova uye yakakwana kupfuura SAS. Iyo ine zvakawanda zvakadzama zvirongwa, madhayagiramu, uye machati.
Zvinonetsa kupfuura R
SAS iri, yakatonyanya, mutauro wetsika uchienzaniswa neiyo R. Iyo ine huwandu hukuru hwemitsetse yemakodhi kupfuura R. Nyowani kufambira mberi senge machine learning uye kudzidza manhamba kwakabatana pakarepo muR kupfuura muSAS. Mazhinji mapakeji akasununguka muR asi anobhadharwa muSAS. Semuenzaniso, Chinyorwa chemigodhi, Nguva yakateedzana kufungidzira (SAS / ETS), zvichingodaro.
Zvinonetsa Meseji Kuchera
Kutumira mameseji mahara maR, zvisinei, muSAS, inoshandisa bhizimusi reSAS. Zvinyorwa zvemigodhi zvinoreva kuburitsa dhata kubva pane zvemukati. Izvo zvinotevera kududzira kodhi yakanyorwa. Iyo inokuratidza kwauri izvo izvo zvakanyorwa zvemukati zvinogona kukonzeresa maererano nesarudzo yekuita. Ndiyo maitiro ekuti zvemukati zvinoshanduka kuenda kune dhata rekuongorora uye kutora sarudzo.
Imwe yakakosha kudzora kweSAS ndiyo mutengo. Mutengo weSAS Bhizinesi Njere inogona kuratidza kuve inodzvinyirira zvishoma. Kuve mune yakavharwa dura, iri yakazara chirongwa mukati mawo. Asi munhu haakwanise kushandisa ese mashandisirwo asina rezinesi rakakodzera.
Kufambira mberi kwebhizinesi kunoenderana nemabatirwo akaitwa uye kuitwa nemazvo. Ichokwadi kuti zvakakosha kune vebhizinesi vakuru uye mamaneja kuti vazive crux yeindasitiri uye vanyatsoibata.
Nokudaro, Bhizinesi Njere uye Analytics have turned into a need for all large and medium scale organizations around the world. SAS is a pioneer in this space holding a great place in the overall industry for cutting-edge research. The interest for SAS BI and Analytics experts are on a lofty ascent as an ever-increasing number of organizations are receiving SAS BI and Analytics programming all over the globe.
Uyewo Verenga: Zvishandiso Zvikuru zveBusiness Intelligence
Bhizinesi Njere uye Analytics is such a field whose development will never stop to increment. In this manner, being implemented with the understanding of one of the market pioneers, SAS, will guarantee a steady future for the experts and companies both.
Unoda a Bhizinesi Njere tool developed? Then reach out to us for a consultation.